Monday April 29, 2019 - 19:26:44 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa howlgallo burcad sifeyn ah ka sameeyay deegaan u dhow degmada Afmadoow ee gobolka Jubbada Hoose.
Waraka ka imaanaya Jubbooyinka ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo xooggan ay ka dhaceen wadada xiriirisa degmooyinka Afmadoow ee iyo Xagar, halkaas oo xoogagga Al Shabaab ay ku baacsadeen maleeshiyaad katirsan maamulka Axmed Madoobe oo falal burcadnimo ku hayay dadka socotada ah.
Wariye ku sugan Jubbada dhexe ayaa SomaliMeMo khadka taleefanka ugu sheegay in ciidamada Al Shabaab ay howlgallada ku waxyeeleeyeen qaar kamid ah maleeshiyaadkii burcadda ahaa.
Waxaa beenoobay warar saan sal iyo raad laheyn oo qaar kamid ah warbaahinta Afsoomaaliga ku hadasha ay baahisay oo ahaa in ciidamada maamulka 'Jubbaland' ay dagaal ku qabsadeen degmada Xagar.
"Warararka sheegaya in degmada Xagar uu cadawgu qabsaday waa been aan sal iyo raad laheyn,mana jiro cadow degmada usoo dhowaaday shacabka Xagar waxay ku hoos noolyihiin ku dhaqanka shareecada islaamka" sidaas waxaa yiri mid kamida dadka deegaanka.
Saraakiisha maamulka Axmed Madoobe ayaa markii ciidamadooda lagu jebiyay dagaalkii ka dhacay duleedka Afmadoow waxay warbaahinta u sheegeen in ay qabsadeen magaalada Xagar arrinkaas oo muujinaya sida ay ugu hungoobeen damacoodi ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xaaladdu tahay mid deggan iyadoona maleeshiyaadkii maamulka 'Jubbaland' ay dib ugu laabteen degmada Afmadoow.